नेपाल टेलिकमको कुन सेवाका गुनासो कुन नम्बरमा गर्ने? नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका बारेमा जानकारी लिन तथा गुनासा राख्नका लागि विभिन्न नम्बर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको १९१, १९७, १९८ र १४९८ नम्बर कम्पनीबाट प्रदत्त विभिन्न सेवाबारे बुझ्न र गुनासा टिपाउन सक्ने जनाइएको छ। शुक्रबार, चैत २७, २०७७
डिस्क ब्रेक के हो? यी हुन् फाइदा र बेफाइदा सवारीसाधनमा विगनमा ड्रम ब्रेक हुन्थ्यो, जुन अहिले पनि चल्तिमै छ। तर पछिल्लो समय आउने सबैजसो दुईपांग्रे सवारीमा डिस्क ब्रेक हुने गरेक... शनिबार, फागुन २९, २०७७
कार किन्दै हुनुहुन्छ? यी विशेषता भएकै खोज्नुस् धेरैले किन्ने कारको स्टाइल, लुक्स र त्यसको माइलेजलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। आफ्नो इच्छा अनुसारको स्टाइल तथा लुक्सका साथै सामान्य... शुक्रबार, साउन २३, २०७७
ट्विटरले ल्यायो अडियो ट्विट सुविधा ट्विटरले आफ्नो सुविधा विस्तार गर्दै भ्वाइस ट्विटरको सुविधा थप गरेको छ। प्रयोगकर्ताले अब नलेखी भ्वाइस मार्फत समेत आफ्नो धारणा राख्न स... शुक्रबार, असार ५, २०७७
लकडाउनमा सवारी चलाउने बाध्यतामा हुनुहुन्छ, यी कुरामा ध्यान दिनुस् कोरोना भाइरसका कारण पुरै विश्व आक्रान्त छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो व्यक्तिगत सुरक्षा। यसका लागि स्वयंको... शुक्रबार, चैत १४, २०७६
के हो बिटक्वाइन, कसरी हुन्छ कारोबार? बिटक्वाइन डिजिटल करेन्सी हो। यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी पनि भनिन्छ। यसको कुनै रङ वा भौतिक रुवरुप हुँदैन। यसलाई मात्र प्राविधिक रुपमा कुनै... आइतबार, माघ २१, २०७४